ဧရာဝတီ| November 3, 2012 | Hits:1
| | ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်နေတဲ့ အိုဘားမား (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
Myanmar man November 4, 2012 - 8:01 pm အမေရိကန်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်မည်ဆိုတော့ တကယ့်ကို ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းပါဘဲ ။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်း သာ ကြိုဆိုကြရမဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေရိကန်ကို တည့်အောင်ပေါင်းနိုင်ပါမှ ကိုယ့်အတွက်အကျိုး ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ လာဖြစ်ပါစေ ။ ညအိပ်တည်းခိုသွားနိုင်ပါစေ လို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် ။
Reply ရန်ကုန်ဘကြီးကျော်မိုး November 5, 2012 - 11:56 am ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ ပြရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ အမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆို တာ
Reply Aung Kyaw Nyunt November 5, 2012 - 9:30 am Prime news indeed!
Reply thantmyooo November 6, 2012 - 3:22 pm i like all.
Reply sit min November 7, 2012 - 2:12 pm အိုဘားမားကဗမာကိုချစ်လို့ သူ နံမည်တောင်အိုဗမာလိုမည့်ထားတာကွ။အိုဘားမားကိုပဲကြိုက်